လျင်မြန်စွာ ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > multi အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > လျင်မြန်စွာ ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
လျင်မြန်စွာ ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-M စီးရီး လျင်မြန်စွာ ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuaသို့r ဖြစ် အသုံးချ တွင် ထိန်းချုပ်မှုlတွင်g အမျိုးမျိုးသော အဆို့ရှင် နှင့် အခြား တူသော ထုတ်ကုန်, တွင်clude လိပ်ပြာ အဆို့ရှင်, အလုံး အဆို့ရှင်, ဂိတ် အဆို့ရှင်, ထိန်းချုပ်မှု အခင်အရှင် နှင့် etc.Over အဆိုပါ အနှစ် ကျွန်တော်တို့၏ AOX-M စီးရီး လျင်မြန်စွာ ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuaသို့r ရှိ ဖူး တင်ပို့ တွင် သုတ် တိုင်း တစ်နှစ်, နှင့် ရှိ ဖူး ကျယ်ပြန့် နှင့် အောင်မြင်စွာ အသုံးပြုခံ့ တွင် ရေ ကုသမှု, ရေနံ, လျှပ်စစ် ပါဝါ, ဓါတုဗေဒ နှင့် အခြား တွင်dustries.AOX လိမ့်မည် ပုံစံ နှင့် ပြုလုပ် ထုတ်ကုန် ညီညီညွတ်ညွတ် နှင့် contတွင်ue ကျွန်တော်တို့၏ အားထုတ်မှု သို့ ဖန်တီး နောက်ထပ် အဘိုး ဘို့ cusသို့mers.
1. Valve mounting စံ
ပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator လှည့်အစာရှောင်ခြင်း AOX-M စီးရီး၏ installation အနားကွပ်မာခ် ISO5210 သို့မဟုတ် DIN3210 စံနှင့်ညီသည်။ အဆို့ရှင်၏အမျိုးမျိုးများအတွက်သင့်လျော်သောရွေးချယ်ဖို့ output ကို drive ကိုအမျိုးအစားအမျိုးမျိုး။
AOX-M စီးရီးပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator လှည့်အစာရှောင်ခြင်းတွင် / ချွတ်နှင့်အသိဉာဏ် Module ထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ် fieldbus interface ကိုရိုးရှင်းကနေအမျိုးမျိုးသောထိန်းချုပ်မှုနဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။
AOX စျေးကွက်၏ကွဲပြားခြားနားသော inquiey မှ industry.According အရည်ကိုထိန်းချုပ်၏လယ်ပြင်တွင်စုဆောင်းခြင်း၏ 23 နှစ်ရှိပါတယ်, ကျနော်တို့လေးပုံတစ်ပုံ-အလှည့်ထုတ်ကုန်များဆက်တိုက်တီထွင်ခဲ့ကြသည်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းကိုအဆို့ရှင်အရည်ကိုထိန်းချုပ်၏လယ်ပြင်ထဲမှာယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တည်ငြိမ်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်အားဖြင့်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ AOX-M စီးရီးအစာရှောင်ခြင်းပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator turn ထိုကဲ့သို့သောသမရိုးကျ series နှင့်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထားစီးရီးအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောကဏ္ဍများသို့ခွဲခြားထားပါသည်။ အားလုံးစီးရီး ON-OFF, Module နှင့်အသိဉာဏ်ထုတ်ကုန်များကရေးစပ်နေကြသည်။ မျိုးစုံအမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာအရည်အချင်းများ၏အကျိုးကိုဆည်းပူးနေစဉ်နှစ်တွေကပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားစျေးကွက်အလေ့အကျင့်များနှင့်လျှောက်လွှာအမျိုးမျိုးလယ်ကွင်းကြုံတွေ့ခဲ့သည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီနည်းပညာသုတေသနနှင့်ထုတ်ကုန်အသစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နည်းပညာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရန်ပုံငွေပမာဏကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။3တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်, 27 utility ကိုမော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့်, 49 ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်များနှင့်4တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်အပါအဝင်စုစုပေါင်း 89 မူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။2utility ကိုမော်ဒယ် patents.We ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ငါတို့ AOX-M စီးရီးအစာရှောင်ခြင်းပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator လှည့်အဘို့အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောအရည်အသွေးကိုစံထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
မေး: AOX-M စီးရီးအစာရှောင်ခြင်းပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator လှည့်အဘို့အသငျသညျ manufactory သို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီပါသလား?
Q: AOX-M စီးရီးအစာရှောင်ခြင်းပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator လှည့် 100 ခန့်ကိုအပိုင်းပိုင်းကိုဝယ်စေချင်ပေမယ့်ကျွန်မတဦးတည်းကြိုးစားကြည့်ချင် firist ။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏တောင်းဆိုမှုကို၏ဘယ်လိုထင်သလဲ
hot Tags:: လျင်မြန်စွာ ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်